घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू हन्सी-डायटर फ्लिक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो हन्सी-डायटर फ्लिकको जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू चित्रण।
सरल शब्दहरूमा, यो प्रबन्धकको जीवन यात्राको कहानी हो, उहाँ बाल्यकालदेखि, जबसम्म उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - हान्सी-डायटर फ्लिकको बायोको एक सारांश।
प्रारम्भिक जीवन र हंस-डाइटर फ्लिकको उदय।
हो, सबैलाई थाँहा हुन्छ कि ऊ एक रेकर्ड ब्रेकिंग, ट्रेबल-विन कोच हो। यद्यपि धेरैले हन्सी फ्लिकको जीवनी पढेका छैनन जुन खुलासा गर्दैछ। थप एडो बिना नै उसको प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट सुरू गर्न दिन्छ।
हंस-डायटर फ्लिकको बाल्यकाल कहानी:
शुरुवात गर्नका लागि, उहाँ प्राय: जसलाई हो भनिन्छ ट्रेबल-विजेता कोच। हान्स-डाइटर फ्लिकको जन्म २ February फेब्रुअरीको दिन उनकी आमा, ट्राउडल फ्लिक र बुबा हान्स फ्लिकको दक्षिणपश्चिम जर्मनीको हेडलबर्ग भन्ने सानो शहरमा भएको थियो।
हंस-डायटर फ्लिकको बृद्धि भइरहेको बर्ष:
जर्मन प्रबन्धक म्याकेनलोचमा हुर्किए जुन नेकर्गेमेन्ड शहर, जर्मनीको एउटा छेउछाउ हो। यो छिमेक प्रजनन संगीतकारहरू र फुटबलरहरूको लागि प्रसिद्ध छ। जर्मन परिवार ब्लगमा बोल्दै; “बच्चाहरूलाई बलियो बनाउनुहोस्”” प्रबन्धकले एक पटक भने;
“म गृहनगरबाट आएको हुँ जहाँ तपाईं या त फुटबल टीमको सदस्य बन्नुहुन्छ वा म्यूजिक क्लबको।
सीमित विकल्पहरूले मलाई फुटबल टोलीमा भाग लिने निर्णय गर्न सजिलो बनायो। ”
हंस-डायटर फ्लिकको परिवार पृष्ठभूमि:
त्यहाँ धेरै सकारात्मक शब्दहरू छन् जसले जर्मनको बचपनलाई वर्णन गर्न सक्दछ "कमी" बाहेक। हंस-डाइटर फ्लिकका अभिभावक मध्यम-वर्गका नागरिक थिए र उनीहरूको छोरालाई नेकर्गेमेन्डको सभ्य क्षेत्रमा हुर्काए। तिनीहरू फुटबल खेल्ने उनको छनोटको समर्थनमा थिए र यो निश्चित गरे कि उनले यसमा राम्रो सुरुवात गरे।
हंस-डायटर फ्लिकको परिवार मूल:
यो सामान्य ज्ञान हो कि प्रबन्धक एक Bonafide जर्मन नागरिक हो। फ्लिकको जातीयता निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानका नतिजाहरुले उनी पफेलजीक जातीय भएको सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ। जातीय समूह उनको जन्म शहर हेडलबर्ग मा पाउन सकिन्छ।
हंस-डाइटर फ्लिकको परिवार जर्मन फाफल्जिस जातीय हो।
क्यारस फुटबलमा हंस-डाइटर फ्लिकको शोषण:
उसको सहज सुरुवातको कुरा गर्नुहोस्, त्यतिबेलाका युवा केवल years बर्षका थिए जब उनले स्थानीय पक्ष बीएससी म्याकेनलोचको लागि खेल्न शुरू गरे। उनले १ V5देखि १ 1976 1981१ सम्म SpVgg Neckargemünd र पछि SV Sandhausen १ 1981 –१-१–1983 सम्म खेल्नको लागि प्रगति गरे।
एस.वी. सन्धौसेनसँगको आफ्नो क्यारियरको शिखरमा, फ्लिक भेटियो र उनी २० वर्षको हुँदा बायर म्यूनिखले क्लबमा ल्याए। उनले उनीहरूसँग बिताएको पाँच सत्रमा उनले चार बुन्देस्लिगा उपाधि जितेका थिए र १ 20 1986 को डीएफबी कप जितेका थिए।
हंस-डायटर फ्लिकको खेल दिनहरू। यहाँ पूर्व मिडफिल्डरको एक दुर्लभ तस्बिर छ बेयरन म्यूनिखको लागि खेल्दै।
हंस-डायटर फ्लिकको जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
जब तत्कालीन मिडफिल्डर आफ्नो अर्को क्लब, एफसी Köln मा एक क्यारियर-खतरनाक चोटपटक लाग्यो, उनलाई थाहा थियो कि उनीसँग अवकाश पाउने समय आएको थियो। २ At का उमेरमा, उनले पेशेवर फुटबल खेल्न बन्द गरे तर एमेच्योर टीम भिक्टोरिया बाममेन्टलको लागि देखा परेर केही समय खर्च गरे।
फ्लिकले कोचिंगमा भाग लिएको र बममेन्टलको प्रबन्ध गर्न धेरै समय लागेन। २००० मा होफेनहाइमको मुख्य कोच नियुक्त हुनु अघि जर्मनले उनीहरुसंग प्रबन्धकको रुपमा धेरै spentतुहरू बिताए। उनले उनीहरुलाई तेस्रो डिभिजनमा पदोन्नती गर्न मद्दत गरे र उनको उत्तराधिकारी राल्फ र Rang्ग्निकको बुन्डस्लिगा २ मा उनीहरूको प्रगति सुनिश्चित गर्नका लागि सही मार्गमा स्थापित गरे। 2000
हंस-डायटर फ्लिकको जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
आफ्नो व्यवस्थापकीय क्यारियरको चरम सीमामा, फ्लिकको २०० Red मा जर्मनीको सहायक कोच बन्नु भन्दा पहिले उनी रेड बुल साल्जबर्गको कोन्टिंग कोचिंगमा थिए। उनले आफ्नो मालिकसँग काम गरे। जोआचिम कम जर्मन राष्ट्रिय टोलीलाई विश्व फुटबलको शिखरमा पुर्‍याउन।
उनीहरूको प्रारम्भिक सफलताहरुमा यूईएफए यूरो २०० 2008 मा दोस्रो स्थान फिनिसको साथै २०१० फिफा वर्ल्ड कपमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्दछ। जर्मनीले उनीहरूको व्यवस्थापन अन्तर्गत अर्को विश्वकप जित्यो जुन विकास हो जसले फ्लिकलाई जर्मन फुटबल संघमा खेल निर्देशकको रूपमा आफ्नो अर्को जागिर लिन सजिलो बनायो।
२०१ 2014 मा, विश्वले केवल जोसिम लुलाई सम्झ्यो, हान्स-डायटर फ्लिक- विश्व कप विजेता सहायक प्रबन्धकलाई होइन।
उनी २०१ H मा बायरन म्यूनिखको सहायक म्यानेजरको रूपमा फर्किनु अघि उनी होफेनहिममा खेल निर्देशकको रूपमा पनि काम गरिरहेका थिए। प्रधान प्रशिक्षक निको कोभाच नोभेम्बर २०१ 2019 मा आपसी सहमतिमा रेड छोडेपछि फ्लिक अन्तरिम प्रबन्धक बने र चौथो स्थानबाट रेडहरूलाई नेतृत्व गरे। आठ पटक लगातार Bundesliga शीर्षक को विजेता।
जुलाईमा उनले DFB पोकल र PSG को सामना गर्दै टीम जित्नको लागि धेरै समय भएको थिएन थमस टुकेल अगस्ट २०२० मा २०१२/२०२० च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने। बाँकी, तिनीहरू भन्छन् कि, इतिहास हो।
हंस-डायटर फ्लिकको पत्नी र बच्चाहरूको बारेमा:
जर्मनले खुशीसँग विवाह गरेको over० बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। हान्सी फ्लिकको श्रीमती सिल्केबाहेक अरू कोही छैन। उनीहरू किशोरावस्थामा पुगे र बमन्टलमा आयोजित विवाहमा औपचारिक रूपमा दम्पती भए।
हान्स-डायटर फ्लिककी पत्नी सिल्क फ्लिकलाई भेट्नुहोस्।
उनका सहयोगी खम्बा मध्ये एक पक्षको रूपमा, हन्सी फ्लिककी श्रीमती उनका दुई छोरीहरू क्याथरिन र हन्नाकी आमा हुन्। दुबै बच्चाहरू हुर्किसकेका छन्। वास्तवमा, हन्ना (कान्छी छोरी) पहिले नै २ भन्दा थोरै बच्चाहरूलाई पोखाउने आमा हुन्।
हंस-डायटर फ्लिकको पारिवारिक जीवन:
परिवार हामी उनीहरूले चाहेको सबै चीज हुन सक्छ। उनीहरूले प्रदान गरेको प्रेम र समर्थन असाधारण छन्। हंस-डाइटर फ्लिकका आमा बुबा, भाइबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू हामी तपाईंमा ल्याउँदछौं।
हंस-डायटर फ्लिकका अभिभावकहरूको बारेमा:
प्रबन्धकको बुवा हान्स नामबाट जान्छन्। उहाँ एक धेरै समर्थक बुबा हुनुहुन्छ जसले आफ्नो छोराको व्यवस्थापकीय कर्तव्यहरूमा धेरै चासो देखाएका छन्। उसको व्यवहारिक हिसाबले फ्लिकले पराजय वा पराजयमा महसुस गरे जस्तो देखिन्छ। फ्लिककी आमा पनि उनको मनमा सबै भन्दा राम्रो चासो र आफ्नो छोरालाई प्यारेन्टल हेरचाहको सबैभन्दा उत्तम दिन आफ्नो पति संग काम गर्दछ।
हान्सी फ्लिकका बाबुआमाले २०१ world को विश्वकप जितिसके पछि उनीहरूको न्यानो स्वागत गर्न बाम्मेन्टल (जहाँ व्यवस्थापक त्यस समयमा बस्थे) बस्ने बासिन्दाहरूको साथ काम गर्दा यस्तो प्रेम र समर्थन सब भन्दा राम्रो रूपमा प्रमाणित भयो।
हंस-डायटर फ्लिक 'भाई बहिनीहरूको बारेमा:
हामीले अझै व्यवस्थापक भाइबहिनीहरूको रेकर्डहरू फेला पार्न सकेनौं। नतिजाको रूपमा, त्यहाँ एक सम्भावना छ कि प्रबन्धक उसको आमा बुबा मात्र बच्चा हो जबसम्म उसले कुनै अन्तर्दृष्टि नदेखीञ्जेल उसलाई एक भाइ वा बहिनीको अस्तित्व सूचित गर्दछ।
हंस-डायटर फ्लिकका सम्बन्धहरूका बारे:
हामीले अझै प्रबन्धकको पारिवारिक जरासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सकेका छैनौं किनकि यो विशेष गरी उसको बुवा र बुवा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। यसै गरी फ्लिकका काका, काकी र काकीहरू अझै अज्ञात छन् जबकि उनका भतिजा र भतिजाको पहिचान हुन सकेको छैन।
हंस-डायटर फ्लिकको व्यक्तिगत जीवन:
हामीलाई थाहा छ प्रबन्धक फुटबलको बारेमा सबै छैन। उसले साथीहरू र परिवारका लागि गुणस्तरीय समय सिर्जना गर्दछ र फुटबल बबल बाहिर खेलाडीहरू र कोचिंग स्टाफका अन्य सदस्यहरूसँग ईर्ष्यालु सम्बन्ध राख्छ।
स्पष्ट लक्षणहरू जुन फ्लिकको व्यक्तित्वलाई परिभाषित गर्छन् उसको नम्रता साथै तर्क र गफका लागि मन नपराउने हो। उसलाई यात्रा गर्न, नयाँ चीजहरू सिक्न, अन्य रुचिहरू र रूचिहरूको बीच चलचित्रहरू हेर्न मन पर्छ।
हंस-डायटर फ्लिकको नेट वर्थ र जीवन शैली:
२०२० मा कोचको नेटवर्थको बारेमा कुरा गरौं र उसले आफ्नो पैसा बनाउन के गर्छ। फ्लिकको अनुमानित कुल सम्पत्ति १ मिलियन डलर छ। उसको सम्पत्तीको स्रोत तलब र ज्याला हो जुन उनीलाई प्रबन्धकको रूपमा भुक्तानी गरिन्छ।
उहाँसँग पनि लाभदायक बिजनेस व्यवसायको आश्वासन छ। यस प्रकार, फ्लिक आर्थिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा सुरक्षित छ। चम्किलो कार र महँगो घर उसको चिन्ताको सूचीमा छैन। उसले बरु कोचिंगको आकर्षक व्यवसायमा सान्दर्भिक रहन खोजिरहेको छ।
हन्सी-डायटर फ्लिक तथ्यहरू:
कोचको बारेमा तथ्यहरू हेर्नुहोस् जुन तपाईंलाई विशेष रूपमा तपाईंको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दतको लागि राखिएको थियो।
तथ्य # 1 - बैंक लिपिक प्रशिक्षुता:
युवा फ्लिक एक समय बैंक प्रशिक्षु थियो। उनले ब्याकअपको रूपमा कामको लागि प्रशिक्षण लिए जुन ऊ फुटबलमा सफल भएन भने पछि फर्केर जान सक्छ। उनी आफ्नो प्रशिक्षणप्रति अत्यन्तै समर्पित थिए कि उनले VFB स्टुटगार्टको लागि खेल्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे जसले १ 1983 84 / BXNUMX बुंदेस्लिगा उपाधि जितेका थिए।
तथ्य # २ - उसको उपनामको बारेमा:
तपाईको विश्वासको विपरित, हन्सी कोचको नाम होईन। यो बरु एक उपनाम हो किनभने ऊ हान्स-डायटर भनेर चिनिन मनपराउँदैन। यसैले, धेरै जसो व्यक्तिहरू उसलाई उनको निक हान्सीले चिन्छन्।
तथ्य #3- खेलकुद पसल:
फ्लिकले बामन्टलमा खेलकुदको पसलको स्वामित्व राख्थे जहाँ उनले २०१ 2015 मा सबैभन्दा कान्छो मानद नागरिकको सम्मान प्रदान गर्थे। सहरका युवाहरू पसलमा अभ्यस्त भए। जे होस्, कोचले यो बन्द गर्‍यो किनकि उनी र उनको परिवारमा जानको लागि अझ महत्त्वपूर्ण चीजहरू थिए।
पुरा नाम हंस-डायटर "हान्सी" फ्लिक
जन्म मिति फेब्रुअरी 24th 1965
जन्मस्थान पश्चिम जर्मनीको हेडलबर्ग शहर
आमाबाबुले Traudel (आमा) र हंस (बुबा)।
भाई बहिनीहरू N /
बच्चाहरु क्याथ्रिन र हन्ना
सोख यात्रा गर्दै, चलचित्र हेर्दै र नयाँ चीजहरू सिक्दै
नेट मूल्य $1
पेशामा फुटबल प्रबन्धक
फ्लिक - ब्यर्न म्यूनिखको रेकर्ड ब्रेकिंग, ट्रेबल विजेता कोचको इतिहास पढ्नको लागि धन्यबाद। हंस-डायटर फ्लिकको जीवनीले हामीलाई अवसरहरूको लागि तयारी गर्न र उनीहरू आइपुग्दा अधिकतम पार्ने प्रेरणा दिन्छ। जर्मन प्रबन्धकले वास्तवमा त्यसो गर्यो कि २०१ 2014/२०२० च्याम्पियन लिग जित्नको लागि २०१ 2019 फिफा वर्ल्ड कप अनुभव र वफादार व्यक्तित्व प्रयोग गरेर।
Lifebogger मा, सटीकता र निष्पक्षता तपाईंको मनपर्ने प्रबन्धकहरूको बारे मेमेरहरू पुर्‍याउने हाम्रो मार्गनिर्देशन सिद्धान्त हो। हंस-डाइटर फ्लिकको जीवन कथामा तपाईले केहि देख्नु भएन जुन सही देखिदैन? हामीलाई यसको बारेमा टिप्पणी सेक्सनमा जानकारी दिनुहोस् वा हामीलाई उहाँको बारेमा के सोच्नुहोस् हामीलाई बताउनुहोस्।
जर्मन फुटबल डायरी
बेंजामिन पावर्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य